Linux 5.5 inouya nekuvandudzwa kweLivePatch uye idzi dzimwe nhau | Linux Vakapindwa muropa
Linux 5.5 inouya nekuvandudzwa kweLivePatch uye idzi dzimwe nhau
Mushure memavhiki akati wandei achifunga kuti achasvika nekukurumidza kana kuti gare gare, Linus Torvalds yakakanda Nhasi Linux 5.5. Iyo yazvino vhezheni yakagadzika yeLinux kernel uye inouya nemazhinji maficha maficha, mazhinji acho ari muchimiro chekusimudzira rutsigiro rwemarudzi ese ehardware. Torvalds pakutanga akange afunga nezve kuburitsa musere Kusunungurwa Musarudzo, asi akafunga kuti zvaisakosha mushure mesvondo rakanyarara uye saizi diki kwazvo yekernel.
Linux 5.5 ndiyo huru kuburitswa, kana kuti yakatonyanya kukosha kupfuura shanduro senge v5.4 ine shanduko inonyanya kuzivikanwa yaive yekunetsana yekuchengetedza module Kusabvumirwa kufamba. Vazhinji vanoti Lockdown "inobvisa nyasha muLinux", nepo vamwe vachifunga kuti ichavandudza kuchengetedzwa kwemasisitimu anoshanda uye vangade kuti kugoverwa kwavo kuitise nekukanganisa. Pazasi iwe une iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva izvo zvinouya neLinux 5.5.
1 Linux 5.5 yakakwira
2 Iye zvino yawanikwa pa kernel.org
Linux 5.5 yakakwira
Iyo Linux 5.5 LivePatch ichatevera mamiriro esisitimu kugadzirisa zvirinani zvigamba. Isu tinorangarira kuti Ubuntu 20.04 Focal Fossa ichave nesarudzo iyi iripo nekuti iri vhezheni yeLTS.
Iyo System76 ACPI mutyairi ichawedzerwa kune yako nyowani Coreboot.
Nyowani Intel HMEM mutyairi wekubata Hardware seIntel Optane DC Persistent Memory.
Rutsigiro rukuru rwevakuru SGI Octane MIPS nzvimbo dzekushandira.
Kuenderera mberi kugoneswa kweTiger Lake / Gen12 mifananidzo, pamwe nerutsigiro rweJasper Lake mifananidzo. Iko zvakare kune rutsigiro rwegumi nemaviri BPC mavara, HDCP inogadziridza uye nedzimwe shanduko kune Intel mutyairi.
Pamwe pamwe neiyo Intel Gen12 giraidhi basa, kune mamwe ekutanga snippets pane iyo Intel Xe Multi-GPU setups.
Tsigiro ye AMD OverDrive yekuwedzeredza yeNavi GPUs.
Tsigiro yeiyo HDCP AMDGPU yekugona kwayo kwemukati yekudzivirira.
Yakawanda Arcturus GPU kodhi yakawedzerwa kune icho chisina kuburitswa Radeon Pro chigadzirwa. Zvakare AMDGPU inogadzirisa manejimendi emagetsi, Navi uye mamwe maRadeon grafiti bits.
Tsigiro yeAdreno 510 inosanganisirwa muMSM DRM mutyairi.
Yakavandudzwa magetsi ekuchengetedza pamasanganiswa emabhuku eIntel Graphics uye discrete NVIDIA GPU.
Dzidzo yeIntel Speed ​​Sarudza Chishandiso.
NVMe tembiricha yekutyaira inozotaurwa kuburikidza neHWMON / sysfs.
Kubata zvirinani kweExpT4 encryption nekuti FSCRYPT-based encryption ikozvino inoshanda kana saizi yekuvharira iri diki pane iyo saizi peji peji. Iyo nyowani yakananga I / O kuverenga kuiswa kunouyawo neExpT4.
FSCRYPT online encryption rutsigiro.
Thunderbolt 3 software yekubatanidza maneja rutsigiro kubatsira Apple masisitimu.
Iyo Linux 5.5 crypto subsystem inozopedzisira yatsiva asynchronous block cipher API nekushandisa kwe SKCIPHER.
Tsigiro yeNVIDIA DP MST odhiyo.
Intel Ice Lake simba manejimendi manejimendi.
Iyo VirtualBox faira yekugovana mutyairi yakadzoswazve, chimwe chinhu chakabviswa muLinux 5.4.
Kugadziridzwa kwemaHuawei malaptop.
YeZen 2 CPUs, iyo nyowani RDPRU yekuraira ichashambadzwa mu / proc / cpuinfo.
Iyo nyowani yeWiFi WFX inodzora yeSilicon Labs yakaderera simba IoT Hardware.
Iyo nyowani Logitech keyboard controller.
Iye zvino yawanikwa pa kernel.org
Linux 5.5 ikozvino iripo mu Iyo Linux Kernel Archives (kernel.org) uye tinogona kurodha tarball yayo kubva Iyi link. Tinogona zvakare kuisa iyo nyowani vhezheni tichishandisa mushandisi interface maturusi senge Ukuu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux 5.5 inouya nekuvandudzwa kweLivePatch uye idzi dzimwe nhau
Edgardo colombo akadaro
Ndinoda kuziva kuti ndeipi distros inosanganisira Linux 5.5, Linux Mint? Uye kana iwe uchida zvimwe zvine simba Hardware.
Pindura Edgardo Colombo
Distrowatch: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino papuratifomu
Avast anotengesa data remamirioni evashandisi kumakambani makuru